Showing २११-२२० of १,१४२ items.
अन्य देशको तुलनामा कोरोनाका कारण भारतमा मृत्यु हुने दर बढ्दो
धरान । अन्य देशको तुलनामा भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १४८ जनाको ज्यान गएको छ । अन्य देशमा भने कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या घटिरहेको छ । अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी मृत्यु दर भएको इटाली तथा स्पेनको हाराहारीमा भारतमा दैनिक मृत्युको संख्या बढिरहेको हो । वल्र्डोमिटरका अनुसार अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै एक हजार ३९५ छन् । इटालीमा १५६ मात्रै छ भने स्पेनमा ५२ मात्रै छ । तर, भारतमा भने दैनिक मृत्युदर बढिरहेको छ । तर, कोरोना भाइरस प्रारम्भ भएको देश चीनमा संक्रमितको संख्याको तुलनामा भने भारतमा मृत्युदर कम छ । भारतमा हालसम्म एक लाख १
धरान । पश्चिम बंगालबाट सुरु भएको अंफान नामक विध्वंसकारी तुफानका कारण भारतको बंगाल क्षेत्रमा १० जनाको ज्यान गएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार १० देखि १२ जनाको ज्यान गएको हुनसक्ने भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । तुफान १४० प्रतिघण्टाको रफ्तारमा आएको थियो । जसका कारण पुल, घर, टावरलगायतमा पूर्ण क्षति पु¥याएको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको आउटलुकले लेखेको छ । कतिपय क्षेत्रको सम्पर्क पूर्णरूपमा विच्छेद भएको छ । मोबाइलको टावर, पानीका उद्योग, विद्युत् पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएको छ । कलकत्तामा ११४ किलोमिटर रफ्तारमा आँधी आएको थियो । तीन घण्टाको अवधिमा १८
धरान । भारतकाे बिहार राज्यस्थित एक क्वारेन्टाइन अश्लील नृत्य गरेको भिडियाे भाइरल बनेकाे छ । बिहारको समस्तीपुर जिल्लास्थित विभूतीपुर प्रखण्डको एक सरकारी स्कुलको क्वारेन्टाइनमा अश्लील नृत्य गरेको भिडिया अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल बनेको छ । अश्लील भिडियो भाइरल बनेपछि त्यहाको प्रशासनले जाँच गर्नका लागि कडा निर्देशन दिएको छ । यो अश्लील नृत्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरू र केही प्रतिनिधिले मिलेर कार्यक्रम गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा यस्ता गलत गतिविधि गर्नका लागि भारत सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छैन । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि कोरोना कोषका अधिकारी राजीवरञ्जन सिंहाले
पाकिस्तानमा अनर किलिङमा दुई दिदीबहिनीको गोली हानी हत्या
धरान । पाकिस्तानमा ‘अनर किलिङ’ का नाममा आफ्नै बुबा र दाजुले दिदीबहिनीको हत्या गरेका छन् । हत्या आरोपमा बाबु र दाजुसहित तीन जनालाई पाकिस्तानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । अनर किलिङको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि सोही आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । अनर किलिङ अर्थात् पारिवारिक इज्जतका निम्ति हुने हत्यालाई भनिने गरिन्छ । पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा विभिन्न कारणले अनर किलिङ हुँदै आएको छ । अनर किलिङ भएको भिडियो एक युवाले खिँचेका थिए । उनलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । बिहीबार पख्तुनख्वा प्रान्तको उत्तरी वज
अफगानिस्तानमा बम बिस्फोट हुँदा छ घाइते
अफगानिस्तान । स्वास्थ्यकर्मीमाथि लक्षित गरी सडक किनारामा बिछ्याइएको बम बिस्फोट हुँदा छ जनाको ज्यान गएको छ । अफगान सेनाले खोस्टका सरकारी स्वास्थ्य आयुक्तका सहयोगी र तीन जना चिकित्सक समेत ६ जना घाइते भएका जनाएको छ । सेनाले सबै घाइतेलाई तत्काल उद्धार गरी खोस्ट सिभिल हस्पिटलमा भर्ना गरिएको बताएको छ । पछिल्लो समय तालिबान समूहले आम नागरिक र सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्न थालेका छन् ।
प्रकाशित मितिः जेठ ५, २०७७
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि भारत सरकारले देशव्यापी जारी रहेको लकडाउनको लम्बाएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामको लागि लकडाउनको चौथो चरण आगामी मे ३१ सम्म जारी रहने भारत सरकारले जानकारी दिएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले गत २४ मार्चदेखि लागू गरिएको लकलडाउन थप १४ दिनको लागि बढाउने निर्णय गरेको हो । भारतमा पहिलो चरणको लकडाउन गत २४ मार्चमा लगाइएको थियो । दोस्रो चरण लकडाउन १५ अप्रिलमा शुरु भएको थियो । तेस्रो चरणको लकडाउन मे ४ बाट शुरु थियो । भारतले सरकारले गत मे ४ देखि लागू हुने गरी मे १७ सम्म थप दुइ साताको गरिएको तेस्रो चरणको लकडाउन हिजो समाप्त भएको थियो । प
धरान । नेपाली युवा दिवेश पोखरेलले अमेरिकन आइडलको उपविजेतामा चित्त बुझाएका छन् । अमेरिकाको चर्चित रियालिटी शोमा आज भोटिङ खुल्ला भएको थियो । उनी टप ५ मा पुग्न सफल भएका थिए । टप ५ मा पुग्न सफल भएकाहरूले २–२ वटा प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसक्रममा दिवेश उपविजेतामा चित्त बुझाउन पुगेका हुन् । उनलाई अर्थर गनका नामले समेत परिचित छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्क निवासी २१ वर्षीया जष्ट साम आइडल बनिन् । उनको बास्तविक नाम भने समन्था डियाज हो । उनी लाइबेरिय मूलकी अस्वेत गायिका हुन् । उनी भोटिङका आधारमा अमेरिकन आइडल बन्न सफल भएकी हुन् । पर्याप्त भोट अभावका कारण दिवेसलाई सामले उछिनेकी हुन् । नेपाली भूमिमा जन्
धरान । कोरोना भाइरसका कारण भारतमा ९५ हजारकाे हाराहारीमा संक्रमितको संख्या पुग्न आँटेको छ । कोभिड १९ इण्डिया डट ओआरजीका अनुसार हालसम्म ९४ हजार ८३५ जना कोरोनाबाट संक्रमित बनिसकेका छन् । ५५ हजार ५२५ जना अहिले आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनमा रहेर उपचाररत छन् । भारत सरकारले ३१ मेसम्म लकडाउनको अवधि बढाएको छ । हालसम्म २ हजार ९ सय ८० जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार १८६ जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । एक सय ७ जनाको ज्यान गएको छ । चौथो चरणको लकडाउनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान, आन्तरिक उडानलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । लकडाउनका लागि राज्य सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । राज्य सर
नेपाली युवा अमेरिकन आइडलको टप ५ मा, भोटिङ खुल्ला
धरान । नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको टप ५ मा पुग्न सफल भएका छन् । अब उपाधिका लागि भोटिङ खुल्ला गरिएको छ । टप ५ देखि आइडलले भोटिङ खुल्ला गर्दै आएको छ । दिवेशले उपाधिका लागि फाइनल राउण्डको प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । उनले फाइनल राउण्डका लागि दुई वटा प्रस्तुति दिनुपर्ने छ । हरेक फाइनलिष्टले २–२ वटा प्रस्तुति दिनेछन् । त्यसअन्तर्गत दिवेशले पनि दुई वटा प्रस्तुति दिने छन् । त्यसक्रममा दुई घण्टासम्म भोटिङ खुल्ला गरिने छ भने सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने नै अमेरिकन आइडल घोषणा हुने छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकन आइडल प्रभावित बने पनि सबै फाइनलिष्टहरूले आआफ्नै घरबाट प्रस्तुति दिइरहेक
औद्योगिकीकरणको विस्तारसँगै यसको सुरक्षामा ध्यान नदिँदा हुनसक्ने दुर्घटनाले जनधनको क्षति तथा वातावरणीय र जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरको मूल्य निकै महंगो पर्न जाने गर्दछ । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको आन्ध्र प्रदेश राज्यस्थित भाइजाग, विशाखापटनममा एल.जी. पोलीमर्स उद्योगबाट स्टाइरिन ग्यास चुहिँदा भएको दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ । यस घटनालाई विश्वका धेरै सञ्चार माध्यमहरुले पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशन र प्रशारण गरेका थिए । यही मे ७ तारिखको बिहान करीब २.३० बजे भएको सो घटनामा परी कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएका थियो । बेहोस अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना गर
प्रकाशित मितिः जेठ ४, २०७७